AHRN IT – AHRN-Myanmar
All posts by AHRN IT
The AIS Activity thrives to scale-up HIV services in Myanmar for key populations at higher risk of HIV transmission. Among the populations at risk, the AIS activity implements tailored programs
ကမ္ဘာ့တီဘီရောဂါနေ့တွင် End TB Together အဖွဲ့သားများက တီဘီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ End TB Together Facebook Page နဲ့ စတင် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး နိုင်ငံ 30 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်နေတာကို သင်သိပါသလား။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှ အစဥ် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းကာ တီဘီရောဂါ
Bhamo isacity in Kachin State in northern Myanmar where PWID and PWUD are found therefore, harm reduction activities and education session are highly demand for key population. Thus,
Health Education session on Methadone Maintenance Therapy was conducted on 11, February at Seng Taung (Hme Kha) MMT-ART Clinic which was led by Medical Coordinator (MMT-ART) while focusing on Covid
စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီစဉ်တခုပါပဲ! AHRN နှင့် Best Shelter မှ (၅) နှစ်မြောက် NSATM ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ အားအသိပညာပေးမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရှိ ခြင်းအစည်းအဝေး’ကို ယနေ့ နိုဝင်ဘာ (၃၀)တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆိုင်ရှင်များအားလုံးသည်အလွန်ဝေးလံခေါင်သီသောကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်သော မူးယစ်ဆေးအကြောတွင်းထိုးသွင်းသုံးစွဲသူများ နှင့် ၄င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအခြေပြု အသက်ကယ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပေးနေသည့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 ကာလအတွင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည် Needle
အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကုသရာတွင် လိုအပ်သော ပိုးကောင်ရေ စစ်ဆေးခြင်းကို လျင်မြန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ရန် Gene Xpert စက်ကို လားရှိူးမြို့အကျဉ်းထောင်တွင် တပ်ဆင်ပြီး ************************************************************************* AHRN သည် အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ အကျဉ်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခွင့်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူရပါသည်။ AHRN ၏အရေးကြီးမှတ်တိုင်တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပေသည်။ အသည်းရောင် အသားဝါ